Samsung dia mampiseho antsika amin'ny horonantsary ny fomba fiasan'ny mekanika hinge an'ny Galaxy Z Flip | Androidsis
Samsung dia mampiseho antsika amin'ny horonantsary ny fomba fiasan'ny mekanika hinge an'ny Galaxy Z Flip
Miaraka amin'ny fahatongavan'ireo finday avo lenta, ny mpanamboatra dia tsy voatery nanararaotra vola be fotsiny mba hamoronana fampisehoana azo volena, fa tsy maintsy savily famolavolana izay mamela ny fitaovana hisokatra sy hakatona im-betsaka, manahafana ny fampiasana ara-dalàna ny fitaovana, manakana ny efijery tsy handeha ho any.
Samsung, miaraka amina maodely finday roa mivalona amin'izao fotoana izao, no mpanamboatra toa nanambola vola be indrindra tamin'ny maodely hinge ampiasain'ny maodeliny, satria manome mateza mateza ary akanjo kely dia kely, mifanohitra tanteraka amin'ny Motorola ZARZ, izay maharitra herintaona mahery ny faharetan'ny fampiasana azy.
Ho an'ireo mpampiasa rehetra izay tsy mazava ny momba ny savily mampiditra ny Galaxy Z Flip dia hanohitra rehefa mandeha ny fotoana, noho ny mety fidirana amin'ny vovoka sy loto Amin'ny ankapobeny ao anatin'ilay mekanisma, ireo tovolahy avy any Samsung dia nandefa horonantsary tamina tranokalan'ny YouTube izay anehoan'izy ireo amintsika ny fomba fiasan'izy io sy ny fomba hiarovana azy mba hisorohana ny fidiran'ireo singa vahiny izay mety hanimba ny asany.
Ny varotra Galaxy Z Flip dia manondro ny tsena vonona amin'ny fametahana finday avo lenta
Ny famolavolana ny andiany faharoa amin'ny savily finday avo lenta dia tsy mora. Raha ny filazan'i Samsung dia tsy maintsy noforonina izy io ka aza manampy boky fanampiny amin'ny terminal (toy ny Galaxy Fold) ankoatry ny fitazonana ny loto sy ny fasika izay mety hisy fiatraikany amin'ny fandehanany rehefa mandeha ny fotoana.
Ny teknolojia hinge misy patanty (azo ampiasain'ny mpanamboatra rehetra amin'ny toeram-pisavana), dia antsoina hoe Hideaway, ary mampiditra fanavaozana roa: mekanisma CAM roa sosona ary karazana kifafa. Ny mekanika Dual CAM dia manolotra traikefa amin'ny aforitra tsikelikely ary natao hifehezana ny hamafiny toy ny hoe regulator jiro izy io, izay azo avadika amin'ny lalana samihafa mandra-pahitana ny teboka mazava.
Ity mekanisma ity dia mamela ny Galazy Z Flip apetraka amin'ny zoro fanokafana rehetra, zavatra tsy vitan'ny Galaxy Fold, ary ahafahan'ny mpampiasa maka sary miaraka amin'ny fakan-tsary na mampiasa rafitra antso an-tsary fa tsy mila mitazona ny terminal. Ny mpamafa na ny kifafa, no mikarakara manala loto izay afaka niditra ny atin'ny terminal nandritra ny fisokafany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Samsung dia mampiseho antsika amin'ny horonantsary ny fomba fiasan'ny mekanika hinge an'ny Galaxy Z Flip
Ny chipset Dimensity 1000+ dia nambaran'ny Mediatek miaraka amin'ny fanohanan'ny fampisehoana hatramin'ny 144 Hz